Madaxwayne Trump Oo Goob Fagaare Ah Dawlaha Ukraine Iyo Shiinaha Ugu Baaqay In Ay Baadhaan Joe Biden Iyo Wiilkiisa - Borama News Network
Madaxwayne Trump Oo Goob Fagaare Ah Dawlaha Ukraine Iyo Shiinaha Ugu Baaqay In Ay Baadhaan Joe Biden Iyo Wiilkiisa
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu meel fagaara ah ugu baaqay Ukraine iyo Shiinaha inay baaraan Joe Biden iyo wiilkiisa.
Madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden ayaa ugu cadcad tartanka ay Dimuqraadiyiinta ugu jiraan doorashada madaxtinimada ee 2020, waxa uuna udub dhexeed u yahay dedaalka lagu doonayo in xilka loogaga qaado Mr Trump.
“Shiinaha waa in uu baaritaan ku bilaabaa laba Biden,” ayuu yiri Mr Trump, isagoo ka hadlayay wiilka Mr Biden ee lagu magacaabo Hunter.
Dimuqraadiyiinta ayaa waxa ay madaxweynaha Mareykanka ku eedeeyeen inuu deeqda milateri u isticmaalay qaab uu ku cadaadiyo Ukriane si ay usoo qufaan xumaha Mr Biden.
Wicitaan dhanka taleefanka ah oo 25-kii July dhexmaray Mr Trump iyo Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu horseedday inay cabasho muujiyaan koox ka shaqeysa sirdoonka oo xogta bixiyay taas oo sababtay in laga hadlo xilkaqaadista Trump.
Hasayeeshee Mr Trump ayaa sheegay inuusan wax khalad ah sameyn, baaritaanka kongareeska ee ay ku doonayaan inay meesha uga saaraanna waxa uu ku tilmaamay mid lagu baacsanaayo.
Mr Trump ayaa waxa uu Mr Biden iyo wiilkiisa Hunter ku eedeeyay musuq maasuq hareeyay heshiisyada siyaasadeed iyo ganacsi ee ay ku galeen Ukraine iyo Shiinaha, isagoonan wax caddeyn ah soo bandhigin.
Hunter Biden ayaa waxa uu 2014 ku biiray shirkadda gaaska diibiciga ka shaqeysa ee Burisma ee waddanka Ukraine, waxaana halkaas ka soo ifbaxay su’aalo ku saabsan suuragalnimada dano is diiddan oo aabihii halkaas ka soo raaca.
Ukraine ayaa waxaa xilligaas ka socday isbadel siyaasadeed kaddib markii madaxweynihii gacan saarka la lahaa Ruushka xilka laga qaaday, xilli Bidenka wayn uu ahaa qofka maamulka Obama u qaabilsanaa dalalka Bariga Yurub.
2016-kii, Joe Biden ayaa waxa uu dowladda Ukraine ku cadaadiyay inay xilka ka qaaddo dacwad oogaha ugu sarreeyay dalkaasi, Viktor Shokin, kaas oo xafiiskiisa uu baarayay hantiilaha wayn ee iska leh shirkadda Burisma.
Khudbad uu sanadkii hore ka jeediyay hay’ad cilmiga baarto, ayuu Mr Biden waxa uu ku faanay inuu xilka xoog uga qaaday Mr Shokin isagoo ku goodiyay inuu hal bilyan oo doolar oo amaah aheyd uu ka hor istaagi doono Ukraine.
Mr Trump iyo xulafadiisa ayaa waxa ay Mr Biden ku eedeeyeen inuu difaacayay wiilkiisa. Sikastaba xaalku ha ahaadee saraakiil kale oo reer Galbeed ah iyo kooxaha ugu waa weyn ee maalgalinayay dowladda Ukraine ayaa sidoo kale doonayay in xilka laga qaado Mr Shokin sababtoo ah waxaa loo arkayay inuu caqabad ku ahaa dedaallada loogaga hortagayo musuq maasuqa.
DAAWO: Barnaamij Xasaasiya Oo Lagu Soo Bandhigay Arimaha Musuqmaasuqa Iyo Saamaynta Uu Bulshada Ku Leeyahay
Waraysi Xiiso Lah :- Wasiirka Wasaarada Arimaha Dibada Somaliya Oo Ka Hadlay Siyaasada Arimaha Dibada Somaliya
Alshabaab Oo Ciidamo Kenyaan Ah Qarax Kula Eegatay Gudaha Dalka Kenya Iyo Khasaaraha Ka Dhashay Qaraxaasi